Siiraanyo oo ka Fursan Waayey in uu Tago Addis Ababa – Rasaasa News
Siiraanyo oo ka Fursan Waayey in uu Tago Addis Ababa
Sep 12, 2010 ethiopia, Ogaden, ONLF, Somaliland
Madaxweynaha cusub ee maamul gabaleedka Somaliland ayaa waxaa soo wajahay, adayg siyaasadeed oo kaga yimid dalalka Dariska ka dib kolkii uu la yimid siyaasad xidhan oo ay hogaamiyaan qaar ka mid ah dalalka Carabta.
Siiraanyo, oo hore u diiday in uu wax xidhiidh ah la yeesho dawlada Itobiya, ayaa waxaa la filayaan in uu bilowga todobaadkan tago Addis Ababa.
Booqashada Siiraanyo ee Addis Ababa ayaa timid ka dib kolkii uu maamulkiisa soo wajahay burbur iyo mucaarado xoog badan oo ka imanayo dadweynaha maamulgabaleedka Somaliland oo xidhiidh dhaqaale la leh dalka Itobiya.
Beesha Awal oo iyadu si xoog leh u degan Itobiya ayaa mucaarad kala hortimid. Siyaasiyiinta gabalka Awdal ayaa iyaguna in yar ula jira in ay ku dhawaaqaan maamul gabaleed ka madaxd banaan Somaliland.
Waxaana hore u tagay Addis Ababa madaxweynihii hore ee Somaliland oo ay xidhiidh wanaagsan lahaayeen Itobiya, xiligana u ololaynaya in gabalka Awdal uu dhisto maamul u gooni ah.
Waxaa kale oo Addis Ababa 2 todobaad ka hor joogay maamul gabaleedka cusub ee Sool, Sanaag iyo Cayn [SSC], oo xidhiidh wanaagsan la leh dalka Itobiya.
Siiraanyo ayaa waxaa la filayaa in dawlada Itobiya ay kala xaajoon doonto, maamuladaas cusub ee doonaya in ay ka madaxbanaanaadaan maamul gabaleedka Somaliland. Waxaana la filyaa in lagula taliyo Siiraanyo in uusan faragalinin maamulada cusub oo jecel in ay nabadeeyaan maamulaana degaanadooda.
Maamulka Somaliland ayaa tan iyo intii uu yimid hogaanka siyaasada madaxweyne Siiraanyo u muuqda mid ay ka soo cusboonaanayaan khilaafyo hor leh oo u dhaxeeya, siyaasiyiinta Somaliland.
Tolomoge u Turimaayo Nabad Diidka!
Maxaa ka Run ah Hadalka ka Soo Yeedhay Somaliland?